Maalinta: 12-ka July, 2017
Calanka YlarER iyo TCDD markii la soo afjaray buurta Kazbek Mountain: TUNDA Aydın, oo ah xubin shati shati u ah YOLDER, oo ka soo shaqeeyey khariidad ahaan Khariidadda Maareynta TCDD 3.Region, ayaa la qabtay intii u dhaxeysay June-24 Luulyo iyo 2. [More ...]
Mashruuca Mashruuca ee Istanbul oo ku faafay digniin
Digniinta 'Metro fadhiya' ee fadhida ': xisaabinta warbaahinta bulshada ee Metro Istanbul,' faafinta fadhiga 'digniinta ayaa la sameeyay. Farriin loogu magac daray Oturma Sitting Ends by Faafin,, Muwaadiniinta waxaa loogu yeeray Letm aan addeecno sharciga oo aan uga digno kuwa aan u hogaansamin ”. Ku socota Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul [More ...]
'Alo Fayton' Mudada Izmir
Xilligii 'Phaeton Phaeton' ee magaalada İzmir: İzmir Magaala-weynta Metropolitan waxay neef cusub ku keentay farxadda faransiiska ee Kordon waxayna aasaastay "Xarunta Wicitaanka ee Phaeton". Muwaadiniinta hadda laga bilaabo (232) 433 51 55 munaasabadaha gaarka ah [More ...]
Shaqaalaha Akçaray ayaa qaatay tababarka Deray: Kaddib tababarka tababbarka wadaniyiinta ee mashruuca Akçaray oo ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, tababarka farsamada ayaa sii wada. Kaalinta koowaad, Akçaray, halka 44 [More ...]
13 Piece Weerar ka yimid Karsan iyo Malatya!
Weerarkii Labaad ee '13 Punch' laga bilaabo Karsan ilaa Malatya! : Karsan, oo siiya xalal casri ah magaalooyinka oo leh nidaamyadeeda gaadiidka dadweynaha, ayaa gaarsiiya 13 Karsan Atak gaarsiinta Malatya marka loo eego baaxadda wershadaha iyo Malpazarı Minibus Transform Lines. [More ...]
'Abaalmarinta dhismaha sanadka ee 2017' oo laga soo bilaabo Kuuriya oo loo yaqaan "Eurasia Tunnel"
Tunisiga Eurasian, oo isku xira qaaradaha Aasiya iyo Yurub markii ugu horreysay oo ay ka baxaan laba dabaq oo dhag ah oo ka hooseeya dabaqa badda, ayaa helay abaalmarin kale oo caalami ah. Gaadiidka Deg-degga ah, raaxo leh oo aamin ah ee Istanbul [More ...]
Waaxda Shaqaalaha ee Isbedelka Looga Baddeley Macallimiinta
Waaxyaha Qoondeynta ee Laamaha Waxbarida ayaa la Bedelay: Wasaaradda Waxbarashada Qaranka Wasaaradda Warfaafinta Qaranka ayaa la daabacay bishii Luulyo. Waaxyada meelaynta ayaa isbadalay qaar ka mid ah laamaha waxbarida. Qaybo cusub oo loo qoondeeyay dalabka laamaha waxbarida ayaa lagu soo daray wararkeena [More ...]
RayHaber 12.07.2017 Warbixinta Shirka
60 E1 iibsashada tareenka TÜLOMSAŞ Hawlgalkii Qaybta Warehouse ee TCDD
Ma taageersan tahay codsiga 'haweeneyda' oo laga bilaabay magaalada Bursa?
Magaalada Bursa, nidaamka tareenka fudud ee loogu talagalay gaadiidaka magaalada gudahiisa wuxuu helayaa codsi wagon kaas oo mudnaanta siin doona dumarka. Magaalada Bursa, nidaamka tareenka fudud ee loogu talagalay gaadiidaka magaalada gudahiisa wuxuu helayaa codsi wagon kaas oo mudnaanta siin doona dumarka. Booska koowaad [More ...]
Qiimaha Kocaeli wuxuu ku yimaadaa masaafo!
Iskuxirka Isuduwaha Gaadiidka Dawladaha Hoose ee Magaalada Kocaeli (UKOME) kadib kulanka Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli İlhan Bayram iyo Gudoomiyaha Rugta Yaryar Mustafa Kurt ayaa sidoo kale qiimeyn ku sameeyay Isuduwaha Gaadiidka Dowladaha Hoose ee Magaalada Kocaeli [More ...]
Akçaray 1 waa lacag la'aan ilaa bisha Agoosto
Akçaray waa bilaash ilaa Agoosto 1: Tareenka, oo uu furay Kocaeli Metropolitan Mun June 17, wuxuu adeegyo bilaash ah siinayay ilaa maalintii la furay. Adeeg Bilaash ah ilaa Luulyo 15 [More ...]
Dhibaatada IZDENİZ ma dhibayso
Weerarka İZDENİZ saameyn kuma yeelan doono gaadiid: :ZDENİZ A.Ş. Turk-xiran Ururka badmaaxyada 'ee Turkey (TDs) natiijo xun oo ka mid ah wadahadalada shuruudaha shaqada socda ee u dhexeeya ururka iyo Izdemir shaqaalaha shaqada ee 12 [More ...]
Ogeysiiska Qandaraaska: Xarigga Kursiga, Xarigada Dhulka iyo Dharka Qalabka
Kursiga fadhiga, Sagxada Carrada iyo Qulqulka dharka dusha sare TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. CUDURKA GUUD EE HAWADA GUUDKA HAWADA / ANKARA 65000 TYPE YHT SETS FASALKA IYO DIIWAANKA OO KU SAMEYSAY MACLUUMAADKA KOOWAAD, CARUURAHA FARAHA iyo [More ...]